Kacdoonka oromadu ma mid ay xaquuq kaga raadsanayaan Soomaalidda ayuu noqday? – Xeernews24
Kacdoonka oromadu ma mid ay xaquuq kaga raadsanayaan Soomaalidda ayuu noqday?
27. Oktober 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Ismaamulka Oromadu wuxuu in muddo ah ka shaqaynayay Dilal isdaba joog ahaa.Dilalkaas oo wadada dheer ee isku xidha Dirdhabe iyo Addis Abeba ka dhacayaye.
Waxaa wadadaas caado u noqotay in lagula dhaadhaco dadka masaafurka ah ee Soomaalida ah, manasoo koobi karno dadka lagu dilay ama lagu dhaawacay mudo shan iyo toban sano ka badan .Arintani dariiq ku dilka Soomaalida waxay ka horaysay kacdoonka Oromada ee sanadahan dambe. Dilaalka,boobka iyo dhaawacyada loogeysanayo Soomaalida masaafurka ah,waa wax lawadda ogaa hadii ay tahay Dawlada kiliilka 5aad ama Dawlada Oromiya iyo Dawlada Dhexeba.Dhibtaas ama dilalka loo geysanayo gaar ahaan masaafurka Soomalida mudho ka badan 15an sanoo waa wax qofkastiba ogyahay oo qiimo la siinin waxna laga qaban, media ga ama isgaadhsiinta wadankuna indhaha ka furaystay.
Nabadgalyada wadadu waxay sii xumaatay ama xadka ka baxday markii uu bilaamay kacdoonkii Oromada iyo Amxaarada ee aad u xoogaystay2015 kii ,gaar ahaan markuu ismaamulka Somalidu gargaarka lacageed u geeyay Shacabkii Tigreega ee kasoo barakacay Deegaanka Amxaarada.Colaada u dhaxaysa Amxaarada iyo Tigreega iyaa sababtay in ay shacab badan oo Tigree ah oo deganaa deeganka Axmaarada ay hanti badan halkaas ku wayaan maadaama ay shacabka axmaaradu dagaal cad ku qaadeen tigreegii daganaa deegaankoda. Oromada iyo amxaarku waxay xumaan kala sooc lahayn u qaadeen ismaamulka Somalida iyo shacabka Somaaliyeed.waana tani keentay in dadka masaafurka lagu laayo wadadaas.
Ismaamulka Oromadu wuxuu ku dhaqaaqay in uu bilaabo Colaad cusub oo laxidhiidha Soohdinta dheer ay wadagaan labada ismaamul.Oromadu waxay bilowday dagaalo dhul balaadhsi ah.waxayna ka bilowday xuduuda dheer ay labada kilil wadagaan.waxaana ka mid ah Biyo kulul, Hardiin,todobo shubka ,Hudat iyo meelo kale oo badan.Hasa ahaatee Siyaasiyintu ama dadka ku xeel dheer siyaasada TPLF ta waxay xaaladan Cusub ku tilmaamaan mid ah qorshe loo dhiibay OPDO da oo Oromada lagaga leexineyo isbadalkoodii siyaasadeed ay sida adag ugu xayteen. Arintuna waxy u eegtahay jaah wareerin iyo samayn colaad aan meesha oolin oo la dhexdhigo Somaali iyo Oromo. Mudo 3 bilood ah waxay oromo bilawday daandaansi ku sal leh dhul-balaadhsi. Waxaana marag madoon ah weeraradii joogtada ahaa ee ay kusoo qaadaysay soomalida dagan Hardiin ,biyo kulul (biki) IWM .Hadaba xaaladu waxay faraha ka baxday markii wadadaa dheer ay u joogsaden ayna weerar ku qaadeen gawaadhi ka socota ismaamulka somalida oo ay saaranyihiin ciidamo boolis ah oo ismaamulka hardiin iyo madane u waday mushaarkii shaqaalaha Degmoyinkaas,halkaasna waxay ku dileen shaqaalihii iyo askartii baabuurtaa saarnaa hantidiina way ka boobeen .
Waxaa halkaas ka cadaatay in qorshe cusub oo dhul-balaadhsi ah ay maamulka oromadu si cad ubilaabeen . arintii weerarka ahayd way isdaba jiidatay oo isbadalkii shacabka oromadu rabtay way kasoo leexin wayday jihadii isbadal doonka ahayd ee ay rabeen .colaadii la rabay in madaxa la isku gasho somali iyo oromo sidii la rabay way udhici wayday jihaddiina waa laga leexin kari waayay oromo.inkastoo hawshodi jiddka ay kula dhaadhacayeen dadka musafirka somalida ay sixoogan u saddexjibaareen sadexdan bilood ee danbe.
Markaa qorshe kale oo lagu badalo isbadal doonkii oromada ayaa meesha lakeenay qorshehaasna wuxuu ahaa in Colaad adag oo sicad madaxa ay isku gashaan somali iyo oromo meesha la keeno taasna waxay noqotay in xanuun adag oo laga soo laabmi karin la dhexdhigo shacabka soomaalida iyo oromoda si ay iskugu qaadaan
nacayb aan xad lahayn. Ururka OPDO da ayaa abaabulay Dagaal lagu qaado dadka ku dhexnool Gobolka oromoda ee soomalida ah dagaalkaasi wuxuu noqday in dadka masaafurka ah ee maraya jidka dheer ee diridhaba iyo adis ababa isku xidha in lagala dhaadhaco baabuurta oo la gawraco.kuwa kale ee ku dhexnool ee hantida ku leh degaanada cidhifyada ama soohdinta ku yaala ee oromoda iyo soomalida waxa labilaabay in hantidooda la boobo, labarakiciyo, lagana soo eryo dhulkaas.
Meesha la yidhaahdo awaday ayaa iyadu ahayd meel laga finance gareeyo ama laga abaabulo kacdoonka oromada ee bariga itoobiya . Goobtaas oo ahayd meesha ay isku urursadaan Maalqabeenada Oromoda Bariga itoobiya si ay u maal galiyaan una sameeyaan taakulayno ay ku dhisayaan ciidamo mucaarad ah oo Dawlada Dhexe ka soo horjeeda. Hadaba Dawlada dhexe iyo ururka OPDO du waxay Ka shaqeeyeen sidii loo baabin lahaa mucaaridka oromoda ee goobtaas ka hela taakulaynta ,waxayna noqotay in la qorsheeyo siyaasad lagu dabar goynayo meelqabeenadaas iyo halganka gobonimo doonka ee oromada. Qorshehaas la dhigayna wuxuu noqday in si kama danbayn ah colaad looga dhex abuuro soomalida iyo oromada taasina waxay keentay in si naxariisdaro ah oo ka baxsan biliaadantinimada loogu xasuuqo ganacsatada soomaliyeed ee mudada dheer ka shaqaysanayay meesha layidhaa AWADAAY. Xasuuqaas foosha xun leh waxaa gaystay maamulka oromada ee AWADAAY iyo booliska ismamulka oromada dad ka badan boqol qof ayaa lagu gawracay sidii xoolaha iyo qaarna xubnohooda la jarjaray si aan wali loo arag ,halkaas waxaa ka dhacay wax layidhaho Genocide. Dadkii la googooyay qaarkood godadka beerahooda ayay ku dhex rideen kuwa kalena markay ciidamada military gu ay soo gurmadeen ayaa inta laqariyay lagu aasay magaalada Harar.dadkaasna si naxariis daro ah oo aan wali melba lagu arag ayaa inta lagawrgawracay hantidoodiina laboobay oo la qaatay .
Xasuuqaa ka dhacay AWADAAY idaacadaha Itoobiya way qariyeen oo waxay uga hadleen si laba qoomiyadood oo isdishay oo isku dilay sohdinta dhul,
anaa leh iyo anaa leh ah,arintuna waxay ka dhacday waa oromiya dhexdeeda magaaladii ugu ganacsi badnayd ee ugu maal badnayd ah itoobiya. Mida kale idaacadaha mucaradka ah iyo idaacadaha madaxa banana ee wadanka dibadiisa ku yaala sida VOA da iyo DW iyaga naftoodu waxba kamay sheegin xasuuqaas adag ee meesha ka dhacay.Dawlada dhexe iyo ismaamulka oromadu midna raali galin iyo magdhaw dadkii dadku ay ka dhinteen iyo hantidoodi faraha badnayd midna lagama hadal lamana soo hadal qaadin ,waxaan ahayn inay yidhaahdaan waxaa fiicnaan lahayd dadkii ganacsatadi inay ku laabmaan magaaladii dhagarawday.
Dhanka kale waxaan ka maqalnaa idaacadaha madaxa banana iyo kuwa dawliga ah warar sal iyo raad lahayn oo lagu sheegayo in Soomalida ku nool soohdinta laabada kilil ee ormoda iyo Soomalida ay dagaal dilal iyo boob hantiyeed oo kala joogsi lahayn ku hayaan beerlayada masaakinta ah ee oromoda
Waxaa kale oo brobagaandha xad dhaaf ah lagu hayaa liyuu boliska soomalida oo lagu sheegaa inuu dilal, dhac iyo barakicin joogto ah ku hayo beeralayda oromada.
Waxaan ognahay In shacabkii soomaaliyeed ee degenaa magaalada ma’ayso kolba qof sidii looga gubayay gurigiisa looga wadda eryay magaaladaas .waxaan cadaynaynaa in shacabkaas ciidamada OPDO du xoog kaga saareen ma’ayso.
waxaan hubnaa in aan degmooyinka Erer Afdem iyo Muli laga helayn ama uunan joogin hal askari oo liyu boolis ah. balse waxaan 3dan bilood maqalnaa brobagaadha,been abuur lagu sheegayo in liyuu booliisku gaysto gabood falyo, dagaalo oo ay ku wadaan beeralayda masaakiinta ah ee oromo. Brobagaadhahaas waxaa si joogta ah uwada idaacadaha dawlada oromiya iyo kuwa madaxa banana ee ay kamid yihiin VOA da iyo DW iyo kuwa kale oo badan oo lamid ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/Maqaal.png 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-27 17:21:192017-10-27 17:22:15Kacdoonka oromadu ma mid ay xaquuq kaga raadsanayaan Soomaalidda ayuu noqday?
War Deg Deg Ah Daawo Video:Rabshado iyo Mudaharaadyo Ka Socda Kenya Hada, Daawo Waxa Dhici Kara Hadii Shidaalku Dunida Ka Dhamaado.